दलित शब्द खारेजको माग गर्दै गायक शिव परियार
लागू औषधसहित दुई पक्राउ
प्रकाशित: २०७७ जेठ १४, बुधबार
काठमाडौँ । रुकुम घटनाले यतिबेला सिंगो नेपाल स्तब्ध बनेको छ । हरेक नेपालीले आफ्नो तर्फबाट विरोध जनाइरहेका छन् । त्यस्तै नेपाली कलाकारहरुले पनि चर्को विरोध गर्दै दोषीलाई कारबाहीको माग गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै गायक शिव परियारले सामाजिक सञ्जालमार्फत फेसबुकमार्फत स्टाट् लेख्दै दलित भन्ने शब्द नै खारेजीको माग गरेका छन् । उनले स्टाटसमा लेखेका छन्, जब सम्बोधन शब्द नै निच शब्द छ तब समानता कसरि सम्भव हुन्छ ?
जातिय उत्पिडनमा परेका बर्गहरुको सम्बोधनमा प्रयोग गरिने “दलित” शब्द खारेज गरियोस ! यो शब्दको उच्चारण र प्रयोगले पनि मान्छे मान्छे बिचमा बिभेद बढाउन मद्दत गरेको महशुस भएको छ ! दलित सम्बोधनको साटो समग्र जातिय उत्पिडनमा परेका नेपालिहरुको सम्बन्धमा सम्मानजनक शब्दको ब्यवस्था गरियोस !